aft - Synonyms of aft | Antonyms of aft | Definition of aft | Example of aft | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for aft
Top 30 analogous words or synonyms for aft
၂၀၁၅ ဟိန္ဒူကွတ် ငလျင် ပင်မငလျင်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ၁၃:၃၉ AFT၊ ၁၄:၀၉ PKT၊ ၁၄:၃၉ IST (၀၉:၀၉ UTC) အချိန်များတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဖဇာဘတ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၈၂ ကီလိုမီတာအကွာ၊ မြေအနက် ၂၁၂.၅ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုကာ လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘူမိဗေဒမြေတိုင်းဌာန (USGS) ၏ ကနဦးတိုင်းထွာချက်အရ ငလျင်၏ ပြင်းအားမှာ ၇.၇ ရှိပြီး ၇.၆ သို့ ကျဆင်းသွားကာ နောက်ပိုင်းတွင် ၇.၅ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနကမူ မြေငလျင်၏ မဂ္ဂနီကျူ့မှ ၈.၁ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ USGS ၏အဆိုအရ မြေငလျင်ဗဟိုသည် ချစ်ထရွယ်မြို့မှ ၆၇ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ဟိန္ဒူကွတ် ငလျင် ၂၀၁၅ ဟိန္ဒူကွတ် ငလျင် သည် ပြင်းအား ၇.၅ မဂ္ဂနီကျူ့ရှိ မြေငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ၁၃:၃၉ AFT၊ ၁၄:၀၉ PKT၊ ၁၄:၃၉ IST (၀၉:၀၉ UTC) အချိန်များတွင် တောင်အာရှတွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Koran va Monjan ကျေးရွာ၏ မြောက်ဖက် ၄၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ဖြစ်ပြီး မြေအောက်အနက် ၂၁၀ ကီလိုမီတာတွင် ဖြစ်သည်။ ပင်မငလျင်လှုပ်သွားပြီး မိနစ် ၄၀ ခန့်အကြာတွင် ၄.၈ မဂ္ဂနီကျူ့ရှိ နောက်ဆက်တွဲငလျင်တစ်ခု ထပ်မံလှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ၄.၁ မဂ္ဂနီကျူ့နှင့်အထက် ပြင်းအားရှိသော နောက်ဆက်တွဲငလျင်ပေါင်း ၁၃ ကြိမ် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်ခန်း သင်္ဘောပေါ်ရှိ အင်ဂျင်ခန်း (Engine Room) သို့ ER သည် သင်္ဘောတစ်စီးလုံး ရွေ့လျားသွားလာနိုင်ရန် စက်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ဘော၏ လုံခြုံမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုတို့ကို ပိုမိုကြံကြံခံနိုင် စေရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းများကို နေရာသတ်မှတ်၍ ခွဲခြားထားရသည်။ အင်ဂျင်ခန်းသည် ထိုနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်ပစ္စည်းအများဆုံး နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်ခန်းသည် သင်္ဘောကိုရွေ့လျားစေရန် အဓိက စက်မကြီး (Main Engine) ကို အခြေပြု၍ တည်ဆောက်ထားသည်။ တချို့သော သင်္ဘောများတွင် အင်ဂျင်ခန်းကို တစ်ခုထက်ပို၍ တွေ့ရတက်သည်။ အရှေ့အင်ဂျင်ခန်း၊ အနောက်အင်ဂျင်ခန်း (Forward and aft) သို့မဟုတ် ဘေးဘယ်ညာအင်ဂျင်ခန်း (port and starboard) သို့မဟုတ် အင်ဂျင်ခန်း ၁ အင်ဂျင်ခန်း ၂ စသည်ဖြင့် တွေ့ရတတ်သည်။
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် The crew enjoyed, for the first time inabomber, full-pressurization comfort. This first-ever cabin pressure system for an Allied production bomber was developed for the B-29 by Garrett AiResearch. The nose and the cockpit were pressurized, but the designers were faced with deciding whether to have bomb bays that were not pressurized, between fore and aft pressurized sections, orafully pressurized fuselage with the need to de-pressurize to drop their loads. The decision was taken to havealong tunnel over the two bomb bays so that crews could crawl back and forth between the fore and aft sections, with both areas and the tunnel pressurized. The bomb bays were not pressurized.
မီယာအာကာသစခန်း "Mir" was authorised inadecree made on 17 February 1976 to design an improved model of the Salyut DOS-17K space stations. Four Salyut space stations had already been launched since 1971, with three more being launched during "Mir"'s development. It was planned that the station's core module (DOS-7 and the backup DOS-8) would be equipped withatotal of four docking ports; two at either end of the station as with the Salyut stations, and an additional two ports on either side ofadocking sphere at the front of the station to enable further modules to expand the station's capabilities. By August 1978, this had evolved to the final configuration of one aft port and five ports inaspherical compartment at the forward end of the station.
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The V-1 guidance system usedasimple autopilot to regulate altitude and airspeed, developed by Askania in Berlin. (The RLM at first planned to usearadio-control system with the V-1 for precision attacks, but the government decided to instead use the missile against London.) A weighted pendulum system provided fore-and-aft attitude measurement to control pitch (damped byagyrocompass, which it also stabilized). Operating power for the gyroscope platform and the flight control actuators was provided by two large spherical compressed air tanks which also pressurized the fuel tank. These air tanks were charged to before launch. With the counter determining how far the missile would fly, it was only necessary to launch the V-1 with the ramp pointing in the approximate direction, and the autopilot controlled the flight.
မီယာအာကာသစခန်း In addition to the pressurised modules, "Mir" featuredalarge number of external components. The largest component was the "Sofora" girder,alarge scaffolding-like structure consisting of 20 segments which, when assembled, projected 14 metres from its mount on "Kvant"-1. A self-contained thruster block, referred to as the VDU, was mounted on the end of "Sofora" and was used to augment the roll-control thrusters on the core module. The VDU's increased distance from "Mir"'s axis lead to an 85% decrease in fuel consumption, reducing the amount of propellant required to orient the station. A second girder, "Rapana", was mounted aft of "Sofora" on "Kvant"-1. This girder,ascaled-down prototype ofastructure intended to be used on [[Mir-2|"Mir"-2]] to hold large parabolic dishes away from the main station structure, was5metres long and used asamounting point for externally mounted exposure experiments.
မီယာအာကာသစခန်း အခြားထပ်မံ တိုးချဲ့သည့် မော်ဂျူးနှစ်ခုမှာ ၁၉၈၇တွင် "Kvant"-1 တို့ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ တွင် မီယာဆိုက်ကပ်မော်ဂျူး( [[Mir Docking Module|docking module)ဖြစ်ပြီးလုပ်ဆောင်ပုံကွဲပြားသည်။ "Kvant"-1,တွင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော အခြားမော်ဂျူးလေးခုနှင့်မတူပဲ ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင်မပါရှိပေ။ was launched attached toatug based on the [[TKS spacecraft]] which delivered the module to the aft end of the core module instead of the docking node. Once hard docking had been achieved, the tug undocked and deorbited itself. The docking module, meanwhile, was launched aboard during [[STS-74]] and mated to the orbiter's [[Orbiter Docking System]]. "Atlantis" then docked, via the module, to "Kristall", then left the module behind when it undocked later in the mission. Various other external components, including three truss structures, several experiments and other unpressurised elements were also mounted to the exterior of the station by cosmonauts conductingatotal of eighty spacewalks over the course of the station's history.